လျှပ်စစ် operated rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > လျှပ်စစ် operated rotary actuator
လျှပ်စစ် operated rotary actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး လျှပ်စစ် operated rotary actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ quater-အလှည့် လျှောက်လွှာများ - ဘို့ အဆို့ရှင်, dampers နှင့် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု ၏ rotary စက် နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque အကွာအဝေး ၏ 30Nm သို့ 5000Nm.Over အဆိုပါ အနှစ် ကျွန်တော်တို့၏ AOX-R ကို ကို စီးရီး လျှပ်စစ် operated rotary actuaသို့r ရှိ ဖူး တင်ပို့ တွင် သုတ် တိုင်း တစ်နှစ်, နှင့် ရှိ ဖူး ကျယ်ပြန့် နှင့် အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, ရေနံ, လျှပ်စစ် ပါဝါ, ဓါတုဗေဒ နှင့် oအဆိုပါr တွင်dustries.AOX လိမ့်မည် ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ထုတ်ကုန် ညီညီညွတ်ညွတ် နှင့် contတွင်ue ကျွန်တော်တို့၏ efဘို့ts သို့ ဖန်တီး နောက်ထပ် အဘိုး ဘို့ cusသို့mers.
AOX-R ကိုစီးရီးများအတွက် 2. Optional အာကာသအပူပေးလျှပ်စစ် rotary actuator operated: ဒါဟာအိမ်ယာ၏ပြည်တွင်းရေး condensing ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးခြောက်သွေ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုသည်။
AOX-R ကိုစီးရီးများအတွက် 3. Relaible ဂီယာလျှပ်စစ် rotary actuator operated: Gear ကိုအထူးပစ္စည်းများကိုမြင့်နှင့်ပိုပြီးအစိုင်အခဲများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြ၏။
အဓိကဝင်ရိုး၏ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းနှင့် AOX-R ကိုစီးရီးများအတွက် mounting အတိုင်းအတာလျှပ်စစ် rotary actuator operated က output အရွယ်အစားနှင့်ဝင်လာသောထိန်းချုပ်မှုများတိုက်ဆိုင်သည့်အမှားနှင့်လုံခြုံမှုအန္တရာယ်ရှင်းလင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါ mounting အတိုင်းအတာ၏ခြုံငုံဒီဇိုင်းကိုမြည်းကြိုးကိုဖြည် screw နှစ်ခု၏ဖြစ်ပျက်မှုကိုရှောင်။ အဆိုပါ output ကိုရိုးတံဟာဇင့်-လူမီနီယံအလွိုင်းများထက်ပိုမိုမြင့်မား 2.6 ကြိမ်တစ်ဦးဆန့ခွန်အားနှင့်တစ်ဦးသံမဏိပစ္စည်းချမှတ်။ အဆိုပါခြုံငုံဗိုင်းလိပ်တံအစှမျးသတ်တိတိကျမှန်ကန်မှုကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပြီး, တီကောင်ဂီယာနဲ့တီကောင်မြင့်မားသောတိများနှင့်အနိမ့်တန်ပြန်ရှိသည်။ အဆိုပါခြုံငုံ output ကိုရိုးတံအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သံမဏိအဓိကဝင်ရိုး connect လုပ်ထားကြပါတယ်။
Zhejiang Aoxiang Automation နည်းပညာ Co. , Ltd ကုမ္ပဏီ 16.200 စတုရန်းမီတာတစ်ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာနှင့်အတူ, 12.300 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဧရိယာ 12.600 စတုရန်းမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာ 20 ကီလိုမီတာကွာ Wenzhou လေဆိပ်နှင့် Wenzhou မီးရထားဘူတာကနေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာအဆင်ပြေပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနီးပါး 23 နှစ်ကြာလျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း, ဒီဇိုင်း, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်း, ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် training.The နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုပေါင်းစပ်ထက်ပို 60000 ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် rotary actuator operated ကျယ်ပြန့်ရေနံနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ , ရေကုသမှု, သင်္ဘော, စက္ကူ, ပါဝါဘူတာ, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အခြား fields.If သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်, E-mail ကို [email protected] ဖြင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ အမိန့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစံဝယ်ယူအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်း, လုံခြုံခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအသင်းတည်ထောင်ရန်အတွက်, ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated rotary actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
Q: 100 ခန့်ကိုအပိုင်းပိုင်းကိုဝယ်စေချင် AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် rotary actuator operated, ဒါပေမယ့်ကျနော်တဦးတည်းကြိုးစားကြည့်ချင် firist ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏တောင်းဆိုမှုကို၏ဘယ်လိုထင်သလဲ
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated rotary actuator စိတ်ဝင်စားလျှင်ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
hot Tags:: လျှပ်စစ် operated rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်